नामको पछाडि राज र पदको अगाडि राज = युवराज ! – Nilo Aakash
नेकपा एस काे १ सय ७५ सदस्यीय गाउँ कमिटी गठन,
ईलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचाैरकाे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न,
जनज्योतिमा प्रमुख समस्या शाैचालय, स्थानीय युवाहरुले अभियान चलाउने,
जनजागृत अाधारभुत बिद्यालयमा हाजिरीजवाफ सम्पन्न,
मन्त्रीको नाम टुंग्याउने जिम्मा खड्का लाई,
पञ्चपुरी ५ मा नेकपा एसको अध्यक्षमा सुर्य,
प्रहरीले टिकटक चलाउन नपाउने,
शिक्षक हत्याको आरोपी महिला सार्वजनिक,
पञ्चपुरी वडा नम्बर ३ मा नेकपा एकिकृत समाजवादीको वडा कमिटी गठन,
बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी पञ्चपुरीमा बाल दिवस मनाइयो,
नामको पछाडि राज र पदको अगाडि राज = युवराज !
निलो आकाश संवाददाता १७ आश्विन २०७७, शनिबार ११:१०
काठमाण्डाै – महाराज र युवराज उहिले पनि थिए, अहिले पनि छन् । फरक यति हो–उहिलेका महाराजले श्रीपेच लगाउँथे, अहिलेका महाराजले घोचपेच र दाउपेच लगाउँछन् । पहिलेका महाराजका युवराज उत्तराधिकारी हुन्थे, अहिलेको महाराजका युवराज ‘खतिवडा’ छन् । नरुचाइएका युवराज पारस, रुचाइएका युवराज ‘खतिवडा’ ! त्यसैले यत्रतत्र सर्वत्र राज गर्न सक्ने ह्याउ युवराजको मात्रै छ ।
सत्य र अकाट्य कुरा यही हो । हुनुपर्ने र भैरहेको पनि यही हो । यति जान्दाजान्दै पनि तपाईं हामी महाराज र युवराजको आरिस गर्छौं । त्यसैत्यसै मुर्मुरिन्छौं । विरोध र आलोचना गर्छौं । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई च्यापे भनेर मुख अमिलो बनाउँछौं ।युवराज चाहिँ यत्रतत्र सर्वत्र हुने, कुलमान चाहिँ बिजुली अड्डामा दोहोरिन किन नहुने भनेर हिरा र किरा दाँज्न खोज्छौंं ।
अरुको भाग्य भावीले लेखे पनि खतिवडाको त ओलीले लेख्दा रहेछन् भनेर मुखको तीतो फाल्छौं । युवराज चाहिँ यत्रतत्र सर्वत्र हुने, कुलमान चाहिँ बिजुली अड्डामा दोहोरिन किन नहुने भनेर हिरा र किरा दाँज्न खोज्छौंं । राजदूत हुने क्षमता र योग्यता भएका मान्छे अरु पनि थिए, तर किन तिनै युवराज चाहियो भनेर तुक न बेतुकको प्रश्न गरेर आफैंलाई मुर्ख बनाउँछौं ।
कुलमान र युवराजलाई दाँज्न खोज्नु भनेको कुरो नबुझ्नु हो । कुरो बुझेर पनि बुझ पचाउनु हो । शब्दका अर्थ केलाउन नसक्नु हो । स्पष्ट शब्दमा एकपाखे हुनु भनेकै यही हो ।
एकपटक शब्दलाई गहिरिएर बुझौं । नामै युवराज । युवराज भनेको महाराजको जेठो छोरो, राज्यको उत्तराधिकारी । जहाँ पनि राज गर्न सक्ने खुवी बोकेको मान्छे । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकमा गभर्नर, राष्ट्रियसभा सदस्य, अर्थमन्त्री, आर्थिक सल्लाहकार भैसकेको उच्च ओहोदाको व्यक्ति ।
राष्ट्र र अर्थ जोडिएका ठाउँमा अट्न सक्ने मान्छे आफ्नै नामसँग जोडिएको अर्को ठाउँमा किन अट्न सक्दैन ? युवराज र राजदूत । युवराज भनेको पनि राज गर्ने मान्छे, राजदूत भनेको पनि राज गर्ने पद । अगाडिबाट युवराज, पछाडिबाट राजदूत, नामको पछाडि राज, पदको अगाडि राज ! जताबाट पनि नाममै राज झुण्डिएको मान्छे जुनसुकै साल, महिना, काल र बेला पनि राज गर्ने ठाउँमा हुनैपर्छ भन्ने नबुझ्नु एकलकाटे आग्रह हो, मुर्खता हो । यो उल्टो बुझाई हो, कुतर्क हो, अशिष्ट र असभ्य सोचाइको प्रतिफल हो ।
नामले त सबैतिर राजकाज गरेर भ्याउन लागे । नामपछि थरको पालो पनि आउला । थरमा वडा झुण्डिएको छ, खतिवडा । खति भनेको त नोक्सानी, क्षति पनि हो । केन्द्रीय तहका सबै ठाउँमा राज गरेर वडाको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने गए भने त्यसले के कस्तो खति गर्छ भन्नेतिर नलागौं । कामले भन्दा पनि नामले अद्भूत क्षमता भएका मान्छे भन्ने अर्थमा बुझौं ।कुलमानलाई कुलले र जनजनले मानेको । यी मान्छे रहँदा बत्ती जाँदैन भनेर सबैले जानेको । तर नागरिकले मात्र मानेर र जानेर हुँदैन ।
भोलिपर्सि प्रधानसेनापति या पशुपतिनाथको भट्ट पुजारी हुँदै वडा सदस्य पनि बने भने आश्चर्य नमानौं । बरु सबैले जीवनमा एकपटक युवराज खतिवडा जत्तिको रजगज गर्ने सपना देखून् । दशैँमा यही आशीर्वाद लेनदेन होओस् । अनि बल्ल नागरिकको जीवनमा खुशीयाली छाउँछ । देशमा भनेजस्तै समृद्धि आउँछ ।
कहाँका युवराज, कहाँका कुलमान ! यत्रतत्र सर्वत्र राज गर्न सक्ने मान्छे युवराज, कुलले मात्र मान्ने मान्छे कुलमान । कुलमानलाई कुलले र जनजनले मानेको । यी मान्छे रहँदा बत्ती जाँदैन भनेर सबैले जानेको । तर नागरिकले मात्र मानेर र जानेर हुँदैन । सरकार चलाउनेले मान्नु पर्यो नि । अनि सरकारलाई मनाउन जान्नु पर्यो नि ।
बत्ती हुँदा भन्दा नहुँदा फाइदा हुनेहरुलाई खुशी बनाउन सक्नु पर्यो नि । नागरिकलाई मात्रै खुशी बनाउने, सरकारलाई खुशी बनाउन नसक्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मान राख्न नसक्ने मान्छे कुलमान मात्र भएर के गर्नु ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भनेको मान्ने पनि हुनु पर्यो । त्यसैले अरुलाई दश, दश फेर नियुक्ति दिन मिल्छ, कुलमानलाई दोहोर्याउन मिल्दैन ।
त्यसमाथि कुलमानको ठाउँमा फेरि कुलमान त के युवराज पनि फिट हुन नसक्ने अवस्था भैसक्यो । कुलमान छोडेर हिँडेदेखि बिजुली बत्ती कुलमानसँगै आँखा झिम्क्याउन गएको छ । प्राधिकरणका मान्छे भन्छन्, मुसाले बिगारेर यस्तो भएको हो । भनेपछि मुसा मार्न सकियो भने मात्र बत्ती आइरहन्छ । मुसा मार्न न कुलमानले सक्छन्, न अर्को मान्छे या क्षमतावान युवराजले नै । मुसा मार्न त बिरालो चाहिन्छ । बिजुली अड्डाको कुनाकुना, पोलपोलमा म्याउ गर्न सक्नुपर्छ । सबैतिर फिट हुन सक्ने युवराजजस्तै बिजुली अड्डामा म्याउ गर्न सक्ने ह्याउ कसैको होला त ? ujyaalo
आवाज संस्थाद्वारा पञ्चपुरीमा युवा दिवश मनाईयाे,
२८ श्रावण २०७८, बिहीबार १८:२७
स्वर्गीय दाजुकाे सम्झनामा अनाथ बालवालिकालाई सहयोग,
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:५१
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई गृहजिल्लामै कालो झण्डा
१० असार २०७८, बिहीबार १७:०६
पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्दै,
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १९:११
निलो आकाश डटकम । सत्य, तथ्य र निश्पक्ष खबर ।
समाचार, लेख रचना पठाउने ठेगाना:
कम्पनी दर्ताः 244287/077/078
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ताः
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत बाट सञ्चालनमा रहेको niloaakash.com परिक्षण कालमा रहेको हुदा तपाइको रचनात्मक आवश्यक सल्लाह सुझावको अपेक्षा समेत गर्दछौं ।
मिलिजुली मिडिया नेटवर्क प्रालि द्धारा संचालित निलो आकाश डटकमका लागि
प्रबन्ध निर्देशक/ संचालक: अमरबहादुर कार्की
सम्पादक: अमर बहादुर बिक
सह सम्पादक: निशा कडेल
प्राबिधिक: उमेश प्रसाद भाट
कानुनी सल्लाहकार: कलम खत्री
ब्यवस्थापक: प्रकाश कुमार न्याैपाने, कमल कुमार न्याैपाने, खगेन्द्र कडेल
Uncategorized अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार खेलकुद जीवनशैली प्रदेश मनाेरञ्जन राजनीति राशिफल विचार शिक्षा समाचार समाज
© Copyright 2021, Nilo Aakash | Designed with WebPal